Haweenaydii Qoomiyadeeda ka Xoraysay Addoonsiga ee Geesinimada Caanka ku ahayd - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Haweenaydii Qoomiyadeeda ka Xoraysay Addoonsiga ee Geesinimada Caanka ku ahayd
Nanny waxay ahayd hoggaamiye, halyeeyad ah sida dadkeedu u yaqaaneen, qolada ka soo horjeedana falaago, caaqilad, wadaadad, boqorad iyo hooyo.
Haddaba, markii taariikhdu ahayd ku dhawaad 1728kii ayaa boqor Nanny noqotay hoggaamiyaha, taliyaha iyo caaqilka dhaqdhaqaaq-doonkii qoomiyad la odhan jiray Windward Maroons oo doonayey in ay addoonsiga ka xaroobaan, waxaannu dagaalkeedu socday ilaa 1749kii, iyadoo waqti yar kadib qoomiyadeedu heshiis nabadeed la saxeexdeen Ingiriiska oo gumaysan jiray, gaar ahaan xilligaas waxa uu ka soo bilaabmayey 1728 ilaa 1734kii, sida lagu sheegay buugga la yidhaa Cary 1970, boggiisa 20aad.
Sidaa darteed, si loo fahmo boqoradda Nanny iyo hadafyadeedii, maadaama ay meel muhiim ah kaga jirto taariikhda dalka Jumayka (Jamaican) amma dadka madow ee ku nool Latin Ameerika, waxa aad u muhiim ah in taariikhda Maroon xoogga laga xuso, lana ogaado asal ahaan halka ay ka soo jeedaan amma laga soo qaaday si loo addoonsado.
Qoomiyadda Maroons asal ahaan waxay ka soo jeedaan boqortooyadii la odhan jiray Ashantii, taasoo ahayd halka hadda uu ku yaal dalka Ghana ee galbeedka Afrika oo waqtigaas ahayd meelaha ugu badan ee addoonta loo doonan jiray, waxaana la keenay dalka Jamaica si beeraha loogu falo amma ay dhir beeris u sameeyaan, shaqada ay qaban jireen waxay ahayd mid aad u adag oo noole inuu qabto ku adkayd, sababtoo ah adoonta looma haysan in ay bani’aadam yihiin amma qiimo leeyihiin.
Markii ciqaab iyo cadaadis badan ay la kulmeen qofka lagu arko inuu soo jeedana la khaarajiyo amma jidh-dil aannu ka soo waaqsan lagu sameeyo, waxa qasab ku ahayd in raggu sida xoolaha hogtaan amma foorar hawsha loo diro ku dhammeeyaan.
Boqorad Nanny oo xilligaas aan ahayd hoggaamiye ayaa ka soo mudh tidhi dadkii la adoonsanayey, iyadoo qarnigii 18aad bilawday kacdoon amma iska caabbin lagaga soo horjeeday adoonsiga dadkeeda lagu hayey, kaasoo ku salaysnaa dhaqanka Afrika.
Asbaabaha keenay in ay iyadoo haweenay ah dagaal gasho waxa ka mid ahaa in markii afar wiil oo ay la dhalatay lagu xukumay inay si adag u shaqeeyaan, taasina keentay in calool dabacdo, adkaysan waydana dhibaatada iyo ciqaabta lagu hayo qoyskeeda iyo qoomiyadeeda.
Waxa ay go’aansatay in ay ka baxsato xerada amma halka lagu hayey adoonta ee ay beer falida ka wadeen, waanay u suuragashay, iyadoo ay raaceen wiilashay la dhalatay iyo rag kale, kadib waxay u gudbeen buuralayda dalka Jamayka (Jamaica).
Buuraha ay gashay waxay ka aasaastay is-maamul iyo bulsho xor ah oo la yidhaa Maroons, halkaasna waxay ka dhisteen degaan amma magaalo ay u bixisay tuulada Nanny, waxaana boqorad, caaqilad iyo hoggaamiyee diimeed ba ka noqotay Nanny.
Sidoo kale, waxa laf ahaanteeda xornimo-doon ka socdeen dalalka Brazil iyo Haiti. Sidaa darteed, waxa uu dhaqdhaqaaqa iyo iska caabbinta Nanny ku qotomay caqiiqada iyo dhaqanka Afrika inuu noqdo mid la qiimeeyo, iyadoo waliba ku socotay in jihaad loo galo iska xoraynta addoonsiga.
Waxa ay qoomiyadda halkaas joogay ku dhaadan jireen magaceeda, iyada laf ahaanteeduna waxay doonaysay in ay midayso qoomiyadda ku wada hadla luqadda Onyankopong (Twi iyo Ashanti) iyo waliba in ay degaanka ay buuraha ka aasaastay difaacdo si bulshadeedu addoonsiga uga badbadaan.
Maamulkii ay ka talinaysay ee Maroons waxa ay samaysteen ciidan awood badan, kuwaasoo dagaallo ku soo qaada goobaha dhir-beerista laga waday ee adoonta ka shaqaynayeen si ay u xorreeyaan dadka la addoonsado.
Waxa ay isku soo wada qarin jireen dhir si aan loo kala garan iyaga iyo degaanka amma kaymaha, taasoo u ahayd xeelad dagaal. Waxyaabaha ay gurmadka ku dalban jireen amma ku wada xidhiidhi jireen waxa ka mid ahaa geeska lo’da amma goodirka oo ay isu yeedhin jireen, taasoo ay uga gol lahaayeen in aan cadawgu fahmin marka ay isu baaqayaan. Goob kasta oo ay dagaalka ku qaadaan way gubi jireen, kadib waxay ku guulaysteen in ay xoreeyaan 1000 qof oo addoon ah.
Mar kasta oo Nanny iyo ciidammadeedu go’doomaan oo gaajo dareemaan waxa lagu yaqaanay in ay baryaan waxyaabahay caabudi jireen ee awowayaashood ay ka soo gaadheen, kadib waxa mucjiso ahayd in ducadooda Ilaahay u aqbali jiray oo heli jireen cunto.
Adodonsadayaashii waxay guumaystihii Ingiriisiga maamuladiisii waydiisteen in arrintaas uu falcelin ka sameeyo oo uu weerar ku qaado dagaalyahannada Maroonska, kana hortago khatarta gabadhan iyo ciidammadeedu keenayaan oo sababi karta in xataa waddamada awoodda badan adoonta ay haystaan kacdoon samayso, taasina waxay keentay in Ingiriisku soo diro ciidammo weerar ku qaada kaymaha Jamaica ee ay Nanny iyo millatarigeedu ku jireen.
Dhacdadii waqtigaas taariikhdyahannadu way ku doodaan, inkastoo 1734kii la burburiyey magaaladii ay kaymaha ka aasaastay Nanny, taariikhyahannaduna sheegaan in halkaas lagu dilay.
Boqorad Nanny waxa ay rumaysan yihiin Maroons inay nooshahay oo wali ku dhex jirto bulshadooda, balse Nanny waxa lagu aasay magaalo la yidhaa New Nanny Town (Maroon Town), waxana mar walba la dhigaa xabaasheeda laba koob oo biyo ku jiraan, iyagoo aaminsan inay xabaasha inta ay ka soo baxdo cabayso markay haraado sida uu xusay taariikhyahan Jaamacadda Boston ka tirsan oo sannadkii 1931 dhacdada Nanny wax ka qoray.
Maroons waxay maalin iyo habeen hadal hayaan magaceeda ilaa haddana waxa loo bixiyaa ubadka amma hoggaamiyayaasha millateriga ee geesinimadooda ay ka yaabaan, waxaana ka qayb noqotay luuqada Jamaica meelo ka mid ah lagaga hadlo in erayada qaar la soo raaciyo amma xikmad ba looga dhigo
4. Kopytoff 1973, p. 29
5. Thurloe 1656, p. 605.